YEYINTNGE(ကနဒေါ): Friday, March 14
၁။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥက္ကဌ
၂။ ဦးဥာဏ်ဝင်း အဖွဲ့ဝင်
၃။ ဦးဟံသာမြင့် အဖွဲ့ဝင်
၄။ ဦးအုန်းကြိုင် အဖွဲ့ဝင်
၅။ ဦးဝင်းမြင့် အဖွဲ့ဝင်
၆။ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် အဖွဲ့ဝင်
၇။ ဒေါက်တာမေ၀င်းမြင့် အဖွဲ့ဝင်
၈။ ဦးဝင်းထိန် အဖွဲ့ဝင်
၉။ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် အဖွဲ့ဝင်
၁၀။ ဒေါက်တာအောင်မိုးညို အဖွဲ့ဝင်
၁၁။ ဒေါက်တာမျိုးအောင် အဖွဲ့ဝင်
၁၂။ ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ် အဖွဲ့ဝင်
၁၃။ ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့် အဖွဲ့ဝင်
၁၄။ ဦးကျော်ခင် အဖွဲ့ဝင်
၁၅။ ဦးညီပု အဖွဲ့ဝင်
၁။ ဦးဥာဏ်ဝင်း(၀၉-၅၁၇၉ ၂၄၇)
၂။ ဦးအုန်းကြိုင်(၀၉-၄၃၀၂ ၇၃၇၆)
၃။ ဦးဝင်းမြင့်(၀၉-၄၃၁၄ ၀၉၈၀)
အဖွဲ့ချုပ်၊ ဥက္ကဌရုံးအဖွဲ့တာဝန်ခံ- ဒေါက်တာတင်မာအောင်(၀၉-၅၁၅၉ ၄၅၇)
အဖွဲ့ချုပ်၊ ဥက္ကဌ၏ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ-ဦးဖြိုးဇေယျာသော်(၀၉-၂၀၀၀ ၄၇၁)
၁။ ပညာရေးရာကော်မတီ- ဦးဟံသာမြင့်(၀၉-၇၃၁၂ ၄၃၄၇)
၂။ ဥပဒေရေးရာကော်မတီ-ဦးဥာဏ်ဝင်း(၀၉-၅၁၇၉ ၂၄၇)
၃။ အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ-ဦးဝင်းထိန်(၀၉-၄၉၃၀ ၆၁၅၅)
၄။တောင်သူလယ်သမားရေးရာကော်မတီ-ဦးညီပု(၀၉-၄၂၅၃ ၂၆ ၇၃၂)
၉။ပြန်ကြားရေးကော်မတီ-ဦးအေးကြူ(၀၉-၄၂၀၁ ၁၀ ၁၁၀)
၁၁။ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကော်မတီ-ဦးထွန်းထွန်းဟိန်(၀၉-၄၇၃၀ ၉၇၉၅)
၁။ ရန်ကုန်တိုင်း ဦးမြင့်ဌေး 09-4201 22 966
၂။ မန္တလေးတိုင်း ဦးတင်ထွဋ်ဦး 09-4713 2433
၃။ ပဲခူးတိုင်း ဦးသိန်းဒန် 052-23097(Office)
၄။ မကွေးတိုင်း ဦးသိန်းဇော် 09-2562 44 427
၅။ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေါက်တာမြင့်နိုင် 09-4200 29 063
၆။ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေါက်တာမျိုးညွန့် 09-49325379
၇။ တနင်္သာရီတိုင်း ဦးအောင်စိုး 09-7321 6471
၈။ရှမ်းပြည်နယ် ဒေါ်ခင်မိုးမိုး 09-5210 156
၉။ မွန်ပြည်နယ် ဒေါက်တာခင်ဆောင် 09-8723 296
၁၀။ ရခိုင်ပြည်နယ် ဦးညီပု 09-4253 26 732
၁၁။ ချင်းပြည်နယ် ဦးဇိုဘွဲ 09-4310 4661
၁၂။ ကရင်ပြည်နယ် ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့် 09-7376 0072
၁၃။ကယားပြည်နယ် ဒေါက်တာခင်စည်သူ 09-5601 456
၁၄။ ကချင်ပြည်နယ် ဦးဇော်လွင် 09-2401 558
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ရုံးချုပ် ရုံးအဖွဲ့မှုး-ဦးသိန်းဦး (၀၁ ၅၅၅၁၅၆)
BY YeYint Nge ... 3/14/20140comment
သမ္မတ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ငွေကျပ်သန်းပေါင်း ၁၆၀၀၀ ကျော် အစိုးရအဖွဲ့ ထုတ်သုံး
ဘဏ္ဍာငွေ မလုံလောက်ခြင်းနှင့် နှစ်စဉ် ကြုံတွေ့နေရသော မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ အဖွဲ့သည် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာငွေမှ ၁၆၇၃၂ ဒသမ ၂၁၉ သန်း ထုတ်ယူ သုံးစွဲထားကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ သုံးစွဲငွေ စာရင်းကို အတည်ပြု မှတ်တမ်း တင်ပေးရန် နိုင်ငံတော် သမ္မတက မတ် ၁၃ နေ့တွင် ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သုံးစွဲငွေတွင် လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက တောင်ငူခရိုင် ပဲခူး-စစ်တောင်း တူးမြောင်း ပြန်လည် တူးဖော်ရေး အတွက် ကျပ် ၁၁၂၅၀ သန်း၊ လက်ပံတန်း ဆည်မြောင်း၊ တာတမံ၊ ရေကာတာများ မိုးရာသီ လုံခြုံရေးအတွက် ကျပ် ၆၈ ဒသမ ၈၀၀ သန်း၊ မန္တလေးတိုင်းရှိ ထီးလှိုင်ကန် ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် ကျပ်သန်း ၂၀၀၀၊ တောင်သာမြို့နယ် ဇဂျမ်း၊ ကန်မြဲ နယ်မြေရှိ သောက်ရေနှင့် စိုက်ပျိုးရေ ရရှိရေး အတွက် ကျပ်သန်း ၃၉၀ နှင့် ပဲခူးတိုင်း တောင်ငူခရိုင် အတွင်း စစ်တောင်းမြစ်ရေ လွှမ်းမိုးမှုကို ကာကွယ်နိုင်ရေး အတွက် ကျပ် ၈၀၃ ဒသမ ၃၅၀ သန်းတို့ကို ထုတ်ယူ သုံးစွဲထားကြောင်း သမ္မတ၏ အဆိုပါ အကြောင်းကြားစာတွင် ပါရှိသည်။
ထို့အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ ကျပ် ၁၀၇ ဒသမ ၁၀၄ သန်း၊ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၁၇ ဒသမ ၂၀၀ သန်း၊ ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကလေးခရိုင် ကမ်းပြိုမှုအတွက် ၃၂၇ ဒသမ ၃၄၀ သန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း ကျောက်တန်းမြို့နယ် ကမ်းပြိုခြင်း အတွက် ၁၆၇ ဒသမ ၂၀၀ သန်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ကန်ကြီးဒေါင့်မြို့ ကမ်းပါးပြိုခြင်း အတွက် ၂၀၆ ဒသမ ၃၀၀ သန်း၊ လပွတ္တာ-သင်္ကန်းကြီး ကားလမ်း ကမ်းပါးပြိုကျမှု အတွက် ၂၇၅ ဒသမ ၉၀၀ သန်းကို ထုတ်ယူ သုံးစွဲထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ အကြောင်းကြားစာ အရ သိရှိရသည်။
ယင်းငွေများကို ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းတံတား အရေးပေါ် ပြုပြင်ခြင်း ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အရေးပေါ် အသုံးပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အချို့က ဆိုသည်။
အခြေခံဥပဒေတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတက နိုင်ငံအတွင်း အရေးပေါ် ကိစ္စများနှင့် လိုအပ်ချက်များ ရှိပါက ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာ ရန်ပုံငွေမှ သီးသန့် ထုတ်ယူ သုံးစွဲနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းသုံးစွဲငွေ စာရင်းကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က မှတ်တမ်း တင်ထားမည် ဖြစ်ကြောင်း နာယက သူရ ဦးရွှေမန်းက ကြေညာခဲ့သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအပေါ် ပြင်နိုင်သည့်အချက်များမှစ၍ ပြင်ဆင်ရမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရာတွင် ပြင်ဆင်နိုင်သည့်အချက်မှစ၍ ပြင်ဆင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နေပြည်တော်၌ မတ် ၁၃ ရက်က ပြောကြားသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ဦးစားပေးစာရင်းတွင် အရေးကြီးပုဒ်မဖြစ်သော ၄၃၆၊ ၅၉(စ)နှင့် တပ်မတော်အခန်းကဏ္ဍတို့ မပါဝင်ဘဲ ပုဒ်မ ၄၃၆(ခ)ပါ ပုဒ်မများကိုသာ ဦးစားပေးသုံးသပ်ရန် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအကောင်အထည်ဖော်မှုကော်မတီက ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် သတင်းထောက်များ၏ မေးမြန်းမှုများကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထိုသို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ပြင်နိုင်တဲ့နေရာကတော့ စပြင်ရမှာပေါ့။ အားလုံး ကိုယ်လိုချင်တဲ့အတိုင်းပဲ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းလည်း ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ နောက်ပြီးတော့ တင်လိုက်တဲ့ဟာလည်း လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးဦးမှာပဲ။ နောက်ဆုံးကျတော့ လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ”ဟု အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လူထုသဘောထားရယူပွဲများကို နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါဟောပြောပွဲများတွင် ပါတီဝင်ဥပဒေပညာရှင်များက ဖွဲ့စည်းပုံပါ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သော ပုဒ်မ ၅၉၊ နိုင်ငံရေးတွင် တပ်မတော်ပါဝင်မှု အခန်းကဏ္ဍတို့နှင့် ရှေ့နောက်မညီညွတ်သည့် အချက်အလက်များသည် ဒီမိုကရေစီနှင့် မကိုက်ညီကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ဒီမိုကရေစီနှင့်မကိုက်ညီသောပုဒ်မများကို ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရာတွင် ပြည်သူလူထု၏ သဘောထားကို လျစ်လျူရှု၍မရကြောင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနှင့် တပ်မတော်တို့မှလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သတင်းမီဒီယာများသို့ ပြောကြားခဲ့ဖူးသည်။ ထို့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD ပါတီအနိုင်ရမည်ကိုကြောက်၍ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၅၉)(စ)ကို မပြင်ဆင်လိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရာတွင် လွှတ်တော်က ပြည်သူလူထုဆန္ဒအတိုင်း ဆောင်ရွက်၊ မဆောင်ရွက်ကိုသာ စောင့်ကြည့်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း မီဒီယာများသို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် မတ် ၉ ရက် ညနေ ၅ နာရီခန့်က နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတလယ်တောအိမ်၌ ငါးကြိမ်မြောက် သီးသန့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးက တွေ့ဆုံမှု အသေးစိတ်နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
ထိုသို့တွေ့ဆုံပြီး မတ် ၁၂ ရက်တွင်လည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ နှစ်ဦးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအကြံပေးများ တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း သတင်းဖော်ပြချက်များအရ သိရပြီး ထိုတွေ့ဆုံမှုတွင် မိမိမပါဝင်ကြောင်း သတင်းထောက်များအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီမှ အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၃၁ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၄ ဦး၊ NLD ပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးအပါအ၀င် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃၁ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်နိုင်ရေးအကောင်အထည်ဖော်မှုကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ခြောက်လအလိုတွင် ဥပဒေပြု၍ ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ရမည်ဟု မူဝါဒချမှတ်ထားသည်။
(မတ် ၁၃ ရက်က ပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တွေ့ရစဉ်)
CNN ပီကင်းစံတော်ချိန် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့၁၀ နာရီ၄၈မိနစ် မှာမလေးရှားလေယဉ်ပျောက်ဆုံးမှူနှင့် ပတ်သက်ပြီးသတင်းတစ်ခု ဖွင့် ဟခဲ့ ပါတယ်…အမေရိကန် CIA ပါဝင်လာပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးချက်အရ MH-370 ဘိုရင်း 777 ဟာ ၂၀၁၄ မတ် လ ၈ရက်နေ့၂ နာရီ ၂၁ မိနစ် မှာပီနန် အနောက်မြောက်ဖက် မာလက္ကာပင်လယ်နားမှာမလေးရှားလေတပ် ကပစ်ချလိုက်တာပါ ..နောက်ဆုံးပစ်မိန့် ပေးခဲ့ သူ က မလေးရှားတော်ဝင်လေတပ်မှ commander Madezhali – Daud ဖြစ်ပါတယ် .CNN ဂျာနယ်လစ်ဖက်မှာတော့ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးခိုင်လုံတဲ့ အထောက်ထားမရှိပေမဲ့စုံစမ်းထောက်လမ်းပြီးတင်ပြပေးသွာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်. CNN အထူးသတင်းထောက် ONEJOYO ရဲ့ ကွာလာလမ်ပူမှပေးပို့ လာတဲ့ သတင်းအရမလေးMH 370 နှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းရထားပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်AirAsia CEO ရဲ့ Twitter မှ လေယဉ်ဟာမာလက္ကာရေလက်ကြား အနီးတစ်ဝိုက်ရှိလေယာဉ် ကွင်းငယ် တစ်ခုတွင် ဘေးကင်းစွာဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ သည်ဟုရေးသားခဲ့ ပြီးမကြာမီတွင် ထိုစာသားကိုပြန်ဖျက်ခဲ့ ပါတယ်.. ပီနန်အနီးမှာလေယာဉ်ကွင်းငယ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်. မလေးရှားစစ်ဖက်ရေဒါမှနောက်ဆုံးထောက်လမ်းနိုင်ခဲ့ တဲ့Radar (A) ပွိုင့်ကလဲပီနန်နဲ့ တော်တော်နီးပါတယ်…ပျောက်ဆုံးနေတဲ့MH 370 captain pilot Zaharie Ahmad Shah (၅၃)နှစ် ကလည်းပီနန်သားဖြစ်ပါတယ်.
Mh 370 ဟာပျံသန်းနေရင်း ဆက်သွယ်မှုပျက်တောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ တာကြောင့် လေယာဉ်ဟာရှေ့ ဆက်မသွားတော့ပဲနောက်ကိုပြန်လှည့် ပြီးပျံသန်းခဲ့ တာပါ..ဆက်သွယ်မှူစနစ်ချို့ ယွင်းသွားတာကြောင့်Manually Landing စနစ် ကိုပဲကျင့် သုံးရတော့မှာပါ . လေယာဉ်မှူးကပီနန်ရဲ့ naning လေဆိပ် မှာဆင်းသက်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပြီးဆင်းသက်ဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ မလေးရှားစစ်တပ်ရေဒါမှ အမျိုးအမည်မသိတဲ့ ပျံသန်းနေသောအရာဝတ္ထကိုတွေ့ မြင်ရပြီးဆက်သွယ်သတိပေးခဲ့ သော်လည်းပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမပြုသောကြောင့် ပစ်ချလိုက်တာပါ. အဖြစ်မှန်ကိုဖုန်းကွယ်ဖို့ အတွက် စစ်တပ်ကအပျက်စီးအပိုင်းစများကို၅နာရီကြာရှင်းလင်းခဲ့ ရပြီးနောက်မတ်လ၈ရက်နေ့ ညနေရနာရီမှ လေယာဉ်ပျောက်ဆုံးကြောင်းကြေငြာတာပါ.လေယာဉ်ရဲ့ နောက်ဆုံးရေဒါမှတွေ့ရှိခဲ့တာကိုတော့
ဗီယမ်နမ်ဖြစ်ပါတယ်.နိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ပါဝင်ခဲ့ ပြီးရှာဖွေခဲ့ သော်လည်းလေယာဉ်ရေဒါမှပျောက်ဆုံးသွားသောရေပြင်တစ်ဝိုက်တွင်မတွေ့ ချေ.လိမ်ညာမှုတွေဟာတစ်စစပေါ်
လွင်လာပါတယ်..စစ်တပ်ရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့် မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းဟာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးအတည်ပြုချက်ကိုရယူပြီးမှသာ ပြည်သူတွေ ကို သတင်းတင်ပြနိုင်တာပါ.အဲ့ ဒါကြောင့် ပဲ မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းကိုလူတွေ ကအမြင်စောင်းနေကြတာပါ.
ကို ဖုန်း မော် နှင့် ကို စိုး နိုင်သို့ ပေး ပို့ သော ဒေါ် အောင် ဆန်း စု ကြည် ၏ သ ဝဏ် လွှာ
မြစ်ဆုံ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းဖို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဒေသခံ ၅၀၀ နီးပါး မြစ်ဆုံစီမံကိန်း တည်ဆောက်မယ့်နေရာမှာ ဒီနေ့မနက်က စုပေါင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဖျက်သိမ်းဖို့ တောင်းဆိုဆန္ဒပြရတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆန္ဒပြရာမှာပါဝင်တဲ့ ကိုထွယ်အောင်က အခုလို ပြောပါတယ်။
"မြစ်ဆုံစီမံကိန်း လုံးဝရပ်ဆိုင်းဖို့အတွက်ပါပဲ၊ CPI ကုမ္ပဏီကိုလည်း ဒီကနေ လုံးဝထွက်သွားဖို့ ဆန္ဒရှိတာပေါ့၊ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေ ပေါင်းပြီးတော့ လုပ်ကြတာပေါ့"
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နိုင်မှုတွေကိုလည်း ဆန္ဒပြပွဲမှာ တက်ရောက်လာသူတွေကို ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။
ဆန္ဒပြသူတွေဟာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနေရာအပြင် အောင်မြင်သာကျေးရွာနဲ့ မြစ်ကြီးနားမြို့ စီတာပူရပ်ကွက်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CPI ကုမ္ပဏီရုံးရှေ့တွေကိုလည်း သွားရောက်ပြီး CPI ကုမ္ပဏီ အလိုမရှိကြောင်း၊ CPI ကုမ္ပဏီထွက်သွားဖို့နဲ့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း လုံးဝဖျက်သိမ်းရေးစတဲ့ ကြွေးကျော်သံတွေကိုလည်း အော်ဟစ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်း ထိုင်းနုိုင်ငံ ချင်းမုိုင်မြို့အခြေစိုက် မြန်မာမြစ်ချောင်းများကွန်ရက် BRN အဖွဲ့က သံလွင်ရေကာတာ စီမံကိန်းတွေရပ်တန့်ပေးဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၁၃၀ ကျော်နဲ့ တိုင်းရင်းသားသုံးသောင်းကျော် လက်မှတ်ထိုးပြီး ဒီကနေ့ ကျရောက်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြစ်ချောင်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရေကာတာဆောက်လုပ်မှု ဆန့်ကျင်ရေးနေ့မှာ ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလုိုက်ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရက တရုတ်၊ ထိုင်းနို်င်ငံတို့နဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး သံလွင်မြစ်ပေါ်မှာ ရေကာတာတွေ တည်ဆောက်သွားမယ့် ရှမ်းပြည်နယ်ထဲက ကွမ်းလုံ၊ နောင်ဖါနဲ့ တာဆန်း ရေကာတာ၊ ကရင်နီပြည်နယ်ထဲက ရွာသစ်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်ထဲက ဟတ်ကြီးရေကာတာတွေဟာ သံလွင်မြစ်ပေါ်မှာမှီခိုနေကြတဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော လူသတ္တ၀ါတွေရဲ့ အနာဂတ်ကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့အတွက် အခုလို တောင်းဆိုလိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ရှမ်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့က တာဝန်ခံ စိုင်းခေးဆိုင်က ပြောပါတယ်။
ဒီရေကာတာ ၆ ခုကနေရရှိမယ့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၁၅၀၀၀ မီဂါဝပ်ဟာလည်း မြန်မာနုိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘဲ တရုတ်နဲ့ ထိုင်းနုိုင်ငံတို့အတွက်သာ အကျိုးခံစားခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ရေကာတာတည်ဆောက်မှုမှာလည်း နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့အညီ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲ စီမံကိန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ခံစားရမယ့် ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာ ကျင့်သုံးတာတွေမရှိဘူးလို့လည်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။
ယနေ့ 7Day နေ့စဉ်သတင်းစာပါ သတင်း
စကားပြောတာ အတော်ကို တန်ဖိုးနည်းတယ်လို့ ပြော၇မယ် ။ ပါတီနဲ့ တည်ငြိမ်တာနဲ့ ဘာဆိုင်သလဲ ။
၂၀၀၈ ကို အတည်ပြုပြီးမှ လူမူရေးအသင်းကနေ နိုင်ငံရေး ပါတီ အဖြစ် ၂၀၁၀ မှာ မှတ်ပုံတင်ပြီး
ဖာကျသွားတဲ့ ကိစ္စမှာ ဘယ်လိုမျိုးများ ပါတီကြောင့် တည်ငြိမ်နေရတာလဲ ကိုရွှေမန်းရယ်
14-3-2014 ရက်နေ့ အမျိုးသားဒီမိုက ရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ပညာရေးကွန် ရက်၃ နှစ်ပြည့် ရံပုံငွေ ရှာဖွေပွဲနှင့်
တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲ ကျင်းပ ရေးအတွက် အားပေးကူညီသူ
အနုပညာရှင် များတွေ့ဆုံပွဲနှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ဒီက နေ့
နေ့လည် ၁ နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင် နှင်းဆီ
NLD ပညာရေးကွန် ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းမှာ ကျောင်းပေါင်း
၁၀၃ ကျောင်းနှင့် ပြည်နယ်တိုင်းမှာ ကျောင်းပေါင်း ၁၁၉ ကျောင်းရှိပါတယ်
ရန်ကုန်တ်ိုင်းမှာ အခမဲ့ သင်ကြားပေးသော ဆရာ ဆရာမ
၁၁၆၈ ဦးနှင့် ပြည်နယ်တိုင်းတွင် ၁၂၁၇ ဦးရှိပါသည်
ရန်ကုန်တိုင်းတွင် nld ပညာရေးကွန် ရက် ကျောင်းများတွင်
တက်ရောက်နေ သော ကျောင်းသားဦးရေမှာ ၁၀၇၂၇ ဦးနှင့်
ပြည်နယ်တိုင်းတွင် ၁၂၈၁၂ ဦး တက်ရောက် ပညာသင်ကြား
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းသူကျောင်းသား
၇၂ ယောက်ကို ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေးများ ထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။
ကျောင်းပေါင်း၂၂၂ ကျောင်းနှင့် ကျောင်းသားပေါင်း ၂၂၅၃၉ ဦး နှင့်
နယ်စပ်ဒေသ ကျောင်းများ စစ်ဘေးရှောင် ကျောင်းသား
လေးမျာကိုလည်းကူညီထောက် ပံ့မှုများပေးနိုင် ခဲ့ပါတယ်။
ဒါအတွက် ၃ နှစ်ပြည့် ရံပုံငွေ ရှာဖွေပွဲကို လည်း အရင်နှစ်ထက် ထူးခြားတဲ့
အစီအစဉ်များထည့်ထားတဲ့ အတွက် လာရောက်အားပေးကြပါရန်
NLD ပညာရေးကွန် ရက်